Shuruudaha iyo Xaaladaha of Advent Calender |
Deposit £ 10 u hesho 25 dhigeeysa on Quest Gonzo ee
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon maalin kasta 3-dii December 2016 (GMT).
Dhigeeysa wuxuu noqon doonaa 20p kacaya oo sax ah oo ku saabsan Quest Gonzo ee
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 25 dhigeeysa free on Quest Gonzo ee kaliya
horumarinta Tani waxay noqon doontaa oo kaliya ansax ku deposit hore ee maalinta aad isticmaali Code Bonus ah “GONZO25”
Si aad u dhaqaajiso ciyaartoyda dhigeeysa waa bilowdo Gonzo ee Quest
wagering uun kulan kuwan: Starburst, Gonzo ee Quest, Twin miiqdaan, Spinata Grande, Pyramid, taajirnimo lacagta, South Park, Jack Hammer, Hooks Heroes, Me la yaabtid, iyakana Stax, Dracula, Jack iyo The
Beanstalk, Xulka, Rush Reel, Lights, Diskoo dhigeeysa, Koi Princess, Mythic xaasnimada, Sparks, Warqadaha, Magic portals, blackjack Classic, Shop Fruit, ubax, uumi Tower, Fisticuffs, Angler Lucky, Tornado Farm cararidda, Subtopia, Jack Hammer 2, Big Bang, Man Invisible, South Park 2 Reel fowdo, King boosaska, Shisheeyaha, siyasad, Qoryaha N GUUSHII, Master of maqan, Drive, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Marka Doofaaro Fly, Motorhead, Secrets of Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
Deposit £ 10 u hesho 10 dhigeeysa on Quest Gonzo ee
horumarinta Tani waxay noqon doontaa 2-maalin firfircoon, 10th iyo 17-December 2016 (GMT).
bonus A of 10 Dhigeeysa lagu dari doonaa xisaabtaada.
Dhigeeysa waxay noqon doontaa 20p kacaya oo sax ah oo ku saabsan Quest Gonzo ee kaliya
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 10 dhigeeysa free on Quest Gonzo ee
horumarinta Tani waxay noqon doontaa oo kaliya ansax ku deposit hore ee maalinta aad isticmaali Code Bonus ah “GONZO10”
wagering uun kulan kuwan: Starburst, Gonzo ee Quest, Twin miiqdaan, Spinata Grande, Pyramid, taajirnimo lacagta, South Park, Jack Hammer, Hooks Heroes, Me la yaabtid, iyakana Stax, Dracula, Jack iyo Beanstalk The, Xulka, Rush Reel, Lights, Diskoo dhigeeysa, Koi Princess, Mythic xaasnimada, Sparks, Warqadaha, Magic portals, blackjack Classic, Shop Fruit, ubax, uumi Tower, Fisticuffs, Angler Lucky, Tornado Farm cararidda, Subtopia, Jack Hammer 2, Big Bang, Man Invisible, South Park 2 Reel fowdo, King boosaska, Shisheeyaha, siyasad, Qoryaha N GUUSHII, Master of maqan, Drive, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Marka Doofaaro Fly, Motorhead, Secrets of Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
50% Kulanka ilaa £ 100
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon 7-dii December (GMT).
Si aad xaq u leedahay gunada ah, ciyaaryahano waa shubto ugu yaraan £ 10 maalinta horumarinta.
bonus A of 50% ee kor deposit ugu badnaan £ 100 waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada.
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon on your deposit ugu horeysay ee muddada dhiirrigelin marka aad isticmaasho code gunno ah “konton”
horumarinta Tani kaliya ka shaqeysiin karaa mar muddada xayaysiis.
Deposit £ 10 u hesho 50 Gonzo dhigeeysa
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon on December 23 2016 (GMT).
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 50 dhigeeysa free on Quest Gonzo ee.
horumarinta Tani waxay noqon doontaa oo kaliya ansax ku deposit hore ee maalinta aad isticmaali Code Bonus ah “GONZO50”
200% Kulanka ilaa £ 40
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon on 4aad, 13th, 16th iyo 21-kii December (GMT).
bonus A of 200% ee kor deposit ugu badnaan £ 40 waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada.
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon on your deposit ugu horeysay ee muddada dhiirrigelin marka aad isticmaasho code gunno ah “200”
100% Kulanka ilaa £ 100
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon on 1aad, 5th, 8th, 15th iyo 22-kii December (GMT).
bonus A of 100% ee kor deposit ugu badnaan £ 100 waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada.
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon on your deposit ugu horeysay ee muddada dhiirrigelin marka aad isticmaasho code gunno ah “100”
Deposit £ 10 u hesho 25 dhigeeysa Starburst
horumarinta Tani waxay noqon doontaa 6-dii maalin firfircoon oo 12-kii December 2016 (GMT).
Dhigeeysa waxay noqon doontaa 10p kacaya oo sax ah oo ku saabsan Starburst kaliya
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 25 dhigeeysa free on Starburst
horumarinta Tani waxay noqon doontaa oo kaliya ansax ku deposit hore ee maalinta aad isticmaali Code Bonus ah “STAR25”
Si aad u dhaqaajiso dhigeeysa ciyaartoyda waa bilowdo Starburst
300% Kulanka ilaa £ 30
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon 9 iyo 19-kii December (GMT).
bonus A of 300% ee kor deposit ugu badnaan £ 30 waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada.
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon on your deposit ugu horeysay ee muddada dhiirrigelin marka aad isticmaasho code gunno ah “300”
10 dhigeeysa Starburst Free
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon maalin kasta 18-kii December 2016 (GMT).
Dhigeeysa wuxuu noqon doonaa 10p kacaya oo sax ah oo ku saabsan Starburst kaliya
Ciyaartoyda mid kastaa wuxuu heli doonaa ugu badnaan 10 dhigeeysa free on Starburst
Deposit £ 10 u hesho 100 dhigeeysa Starburst
dhiirrigelinta waxa uu noqon doonaa 14-maalin firfircoon, 20th iyo 24-kii December 2016 (GMT).
bonus A of 100 Dhigeeysa lagu dari doonaa xisaabtaada.
horumarinta Tani waxay noqon doontaa oo kaliya ansax ku deposit hore ee maalinta aad isticmaali Code Bonus ah “STAR100”
Shuruudaha iyo Xaaladda-Bonus dhigeeysa Khamiista
Shuruudaha iyo Xaaladaha – Secrets of Christmas…